Nnukwu Nza! - Nke a American ere ahịa kere a mkpọsa nke nyefere ozi kwa ụbọchị banyere onyinye na azụmahịa maka ndị ahịa. Ihe okike a jikọtara gallery nke ọdịnaya nwere ike ịnyagharị na okpokolo ọ bụla, na-egosipụta ihe ezumike pụrụ iche, nke eserese iji soro ndị na-azụ ahịa na-emekọrịta ihe. A ụlọ ahịa ugbu a oku na-aga (CTA) bọtịnụ wee duga ngwaahịa ịzụta ngwaahịa. Nke a bụ ihe ịga nke ọma nke ukwuu na njikọta nke ike mgbasa ozi bara ụba na ihe ọchị, ihe osise efu.
STIHL - onye na-ebunye ngwa ọrụ ike na batrị jiri ezumike mkpọsa ezumike nke mmemme mmeghe gwụrụ na ngwugwu ngwugwu ha na isiokwu-agba na ngwaọrụ ike ha. Na ịpị CTA mere ka ndị ahịa nweta ahụmịhe swipeable, yana ọkụ ezumike gbagoro n'elu, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa site na azụmahịa atọ dị iche iche. Ntinye aka na-eduga ndị na-ekiri na ibe nkọwa ngwaahịa na onye nwere ụlọ ahịa iji chọta ụlọ ahịa kacha nso na-ere ngwaahịa ha. Mgbasa ozi a rụrụ nnukwu ọrụ nke ijikọta animation mgbasa ozi bara ụba na mmekọrịta iji mepụta ngalaba na-akpali akpali nke na-eme ka amata ngwaahịa / azụmahịa, yana nnukwu ngwaọrụ maka ịchọta onye na-ere ahịa kacha nso.
Tags: nza buru ibundị ahịakpọọ ka emegamificationonyinye kaadị mgbapụtammefu kaadị onyinyekaadị onyinyeusoro ịzụ ahịa ezumikemmekọrịtajosh cellarsmgbasa ozi mgbasa oziOohn'èzípụọ na mgbasa ozi ụlọstihlomenala mgbasa ozi